Igbo, Romans, Lesson 025 -- We are Justified by Faith in Christ (Romans 3:27-31) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 025 (We are Justified by Faith in Christ)
2. Emere ka agu anyi n’onye ezi okwukwe site na okwukwe na Kraist (Ndi Rom 3:27-31)
NDI ROM 3:27-28
27 isle ebe kwa ka inya isi di? Ewepụghị ya. Site n'iwu? Nke ọrụ? Ee e, kama site na iwu nke okwukwe. 28 Ya mere ayi kwubiri na aguputawo madu n’onye ezi omume site n’okpukpu nke omume.
Ezi omume nke uwa, na idozikwara anyị na Chineke ka emechara n’elu obe. Na agbanyeghị, a na-agu mmadu n’onye ezi omume site n'okwukwe. Anyi na-agụ okwu a “okwukwe” oge iteghete na amaokwu nke 21 ruo 31, ebe onyeozi na-agba akaebe na a na-agu onye ezi omume site n'okwukwe gị dị ndụ.
Kpụrụ a na-egosi mgbanwe kpamkpam na nkwenkwe okpukpe na echiche niile, n'ihi na Chineke agbagharawo mmadụ niile mmehie ha n'enwetaghị ntaramahụhụ ha. Yabụ, ụkpụrụ nke ụwa banyere ịdị uchu, ụgwọ ọrụ, omume ọma, na idebe iwu ana-ada n'ihi na Chineke agbapụtala n’efu, bugara anyị afọ nke amara ya, napụta anyị n'ọnụ ọnụ nke Iwu. Ga-abụ onye mmehie n'agbanyeghị oke obubu ọnụ gị niile, inye onyinye na ịsọpụrụ Chineke, belụsọ ma ịnara ọbara na ezi omume nke Kraist jiri ntụkwasị obi na ekele. Nweghị ọrụ ọ bụla na usoro ikpe nsọ a. Ọ na-abịara gị dịka onyinye sitere na Chineke. O kpere gị ikpe n’ezie, ọ bụghị n’ihi izi ezi gị na ezi omume gị, kama n’ihi na ọbara nke Kraịst sachara gị n’anya nke ọma. Lee amara dị ebube!
Nnabata nke amara a, ekele gị maka ya, na njikọta gị na Onye nyere gị ya pụtara okwukwe. Kpogidere n’obe bụ onyinye Chukwu nyere anyị ndị omekome. N’ime Ya, Onye Okike bịakwutere gị ma sachapụ gị, na-enye onwe ya n’aka gị, onye mmehie n’onye ezi omume. Yabụ, jisie ike na Kraịst na-ekpe ekpere ma nwee ntụkwasị obi ka e wee wusie ezi omume ya ike n’ime gị. Nyefee ya n'aka gị iji gosi na ọ hụrụ gị n'anya.
Okwukwe naegotara onye mmehie. Ọ na-agbanwe echiche nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ma na-eme ka njedebe nke ezi omume nke onwe ya, mgbapụta na ịnya isi, n’ihi na n’ime Kraịst anyị maara na anyị bụ ndị nzuzu, ndị nwere obi ọjọọ, ndị rụrụ arụ, na ndị obi mgbawa. Nzoputa adigh ma obu onye aka Chineke di obi ebere. Ebuzighi ezi ihe banyere gi, ma obu elu ulo akwukwo, ma obu obodo amara gi aka, n'ihi na azoputaghi gi site na ihe nketa gi, diplọmaia ma obu onyinye gi, kama site na okwukwe gi n’ime Kraist. Yabụ, nyefere onwe gị Ọkpara Chineke wee banye n'ọgbụgba ndụ ọhụrụ ya, maka na ndụ gị, na-enweghị ya, nwụrụ anwụ n'ime mmehie, mana n'ime ya a ga-edo gị nsọ n'ezie, ezi omume gị na-adịgidekwa ruo mgbe ebighị ebi. N’ezie n’enweghi uzo ozo di ime Chineke obi uto, ewezuga site n’ịnabata obara nke Kraist na ịnọgide n’ime ya. Chukwu tinye ezị ezi omume gị, yabụ kwe na ya, maka naanị okwukwe na - eme gị onye mmekọ na ike niile na ike niile nke ngọzi niile nke Kraịst.
NDI ROM 3:29-31
29 Ma-ọbu Ya onwe-ya bu Chineke nke ndi-Ju? Ọ bụ na Ọ bụghị Chineke nke ndị Jentaịl? E, ọ bu kwa nke ndi mba ọzọ, 30 ebe Chineke di, onye g willkpe ndi nile obibì-úgwù n’okwukwe na ndi an uncbighi úgwù n’okwukwe. 31 Ayi onwe-ayi sitere n'okwukwe zue iwu? Kpamkpam! Kama nke ahụ, anyị guzobere iwu.
Pol ama ewet leta emi ọnọ ẹsọk ufọkabasi ke Rom. Mgbe o kwuputara ikwuputa ezighi ezi n'ike na nkenke, o nuru na mkpesa ya na mmuo ya:
Ndị Grik kwuru, sị: “Ọ bụrụ na ọnwụ Kraịst gosipụtara ezi omume ya n'ịgbaghara mmehie nke ndị iwu na-eleghara anya, ọ bụ naanị nke obe ka a na-ekepụ, anyị ewezuga onwe anyị.”
Pọl wee za ha, sị: “Ma Chineke agbagharawo mmadụ ha mmehie ha. E nweghị chi ọ bụla maka ndị Juu, na chi ọzọ dịịrị ndị ọzọ, n'ihi na Chineke bụ otu, ya na ọnwụ Jizọs nwụrụ n'elu obe, amala ndị ezi omume ebighị ebi na ndị a na-ebighị úgwù n'okwukwe ha. ”
Ndị Juu ụfọdụ tiri mkpu, sị: “Nke a agaghị ekwe omume! Maka mgbe ahụ, mba ndị ọzọ bụ ndị ezighi ezi na-enweghị ibi úgwù ma ọ bụ iwu, nke bụ nkwulu megide Chineke. Pol, ị na-eleda mkpughe nke Chineke anya. ”
Pọl zara ndị ahụ na-anụ ọkụ n'obi, sị: “Ya zie m ike ịgbanwe mkpughe nke Iwu. Ayi onwe ayi ji ezi ozi nke obe me ka iwu me ka iwu guzosie ike, ayi n’etughari na iwu bu nnabata nke aja Chineke. Obe na-achupu anyị iwu niile nke iwu.
Anyi ghotara, site na mgba Pol na ndi nnabata na ndi isi okwu nke ndi ozo, na obughi ndi nile kwere ekwe ghota ezi omume nke Chineke na idi nma ya, nihi na ha na atu egwu ozi oma na ezi omume bu mmadu nile n’onye ezi omume. Onu ogugu bu ndi biara na nnwere onwe nke ndi Kristian, nke esiteghi na iwu, ịkpa oke agbụrụ, ma obu itinye aka ndi mmadu, kama nke a sitere na okwukwe anyi. Okwukwe anyị na-egosiputa ntụkwasị obi anyị nye Jizọs, na ntụkwasị obi anyị nwere n’ebe Onye hụworo anyị n’anya site na mgbe ebighi ebi.
EKPERE: Nna, anyi n’ekele Gi n’ihi naputara anyi n’ezi omume nke onwe anyi, were ike nke Kraist me ka anyi zie ezi. Anyị bụ ndị mmehie mgbe anyị lere onwe anyị anya, mana mgbe anyị lere Ọkpara gị a kpọgburu anya, anyị na-ahụ ezi omume nke enyere anyị. Mee ka anyị si n'ofufe ụgha anyị wee ghara ịchọ ọrụ mmadụ maka igosipụta onwe anyị, kama ka afọ ju anyị n'ọrụ nke Ọkpara gị maka anyị. Daalụ maka izizi zuru oke, na nkwenye nke anyị nyefere onwe anyị n'aka gị rue mgbe ebighi ebi.
Gini mere eji eme ka ezonye eziomume site na okwukwe, obughi site n’ezi oru anyi?
Emere ka agu n’onye ezi omume site n’onye ezi omume.
(Ndi Rom 3:28)
Page last modified on January 26, 2021, at 06:50 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.140)